FAMPAHALALANA SY SARY AN'NY ALIKA LABRADOR RETRIEVER RETRIEVER - ALIKA
Fampahalalana sy sary an'ny alika Labrador Retriever Retriever
'Othello (Lab mainty 19 volana) sy Hamlet (Lab sôkôla 17 volana) monina ao an-tanàna miaraka amin'i Neny, saingy tian'izy ireo ny mandroaka ny firenena ary mitsidika ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy Jake (mavo 20 volana Lab). Mpilomano mazoto daholo izy ireo, fa rehefa tsy misy ny rano dia tian'izy ireo ny beton milay mandritra ny vanin-taona mafana. '
Labrador Retriever mavo
Misy karazany roa ny Labradors, ny Labrador Anglisy ary ny Labrador Amerikanina. Ny laboratoara anglisy anglisy dia avy amin'ny tahiry anglisy mitombo. Ny endriny amin'ny ankapobeny dia hafa noho ny laboratoara amerikana. Ny Labs miteraka anglisy dia mavesatra kokoa sy matevina ary manakana. Ny Lab amerikana amerikana dia avy amin'ny tahiry amerikana ary lava sy mahia. Malalaka ny palitao roa ary tsy misy onja. Ny loko palitao dia tonga mainty, mavo na sôkôla. Misy koa milaza fa misy volafotsy na volondavenona tsy fahita firy izay resahin'ireo AKC toy ny aloky ny sôkôla . Mampiady hevitra ity loko ity ary misy milaza fa a Weimaraner hazo fijaliana, raha ny hafa kosa milaza fa fiovan'ny tena izy. Ny lohan'ny Labrador dia malalaka miaraka amin'ny fijanonana antonony. Ny orona dia matevina, mainty amin'ny alika mainty sy mavo ary mavo amin'ny alika sôkôla. Matetika ny lokon'ny orona dia manjavona ary tsy raisina ho lesoka amin'ny peratra fampisehoana. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny hety na manaikitra. Ny sakelika dia malalaka. Ny hatoka dia mifanalavitra sy matanjaka. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatana. Ny palitao fohy sy mafy dia mora karakaraina ary tsy mahazaka rano. Misaraka tsara ny maso salantsalany. Ny lokon'ny maso dia tokony ho volontany amin'ny alika mavo sy mainty ary hazel na volontany amin'ny alika sôkôla. Ny laboratoara sasany dia mety manana maso maitso na mavo maitso. Amin'ny alika volafotsy dia mavomavo foana ny lokon'ny maso. Ny molony maso dia mainty amin'ny alika mavo sy mainty ary alika sokola no volontany. Ny sofina dia salantsalany amin'ny habeny, mihantona ary pendant amin'ny endrika. Ny rambon'ny otter dia matevina eo am-potony, mihorona miandalana mankany amin'ny tendrony. Rakotra volo fohy tanteraka izy io, tsy misy volom-borona. Ny tongotra dia matanjaka ary matevina miaraka amin'ny tongotra mitazona tranokala izay manampy ny alika milomano.
Iray amin'ireo karazany malaza indrindra any Etazonia, ny Labrador Retriever dia tsy mivadika, be fitiavana, be fitiavana ary manam-paharetana, manao alika fianakaviana lehibe. Tena manan-tsaina, tsara toetra, tena vonona ary dodona ny hampifaly azy, io dia anisan'ny safidy ambony indrindra amin'ny asan'ny alika fanompoana. Labs dia tia milalao, indrindra amin'ny rano, tsy te handany ny fotoana hilomano tsara. Ireo alika velona ireo dia manana toetra tsara sy azo antoka ary sariaka, mahatalanjona amin'ny ankizy ary mitovy amin'ny alika hafa. Maniry mafy izy ireo fitarihana olombelona ary mila mahatsapa ho toy ny anisany ao amin'ny fianakaviana. Mora ny laboratoara Ampiofanina . Ny sasany dia azo atokisana amin'ny olon-tsy fantatra raha tsy hoe tena tsara ifaneraserana , tsara kokoa raha mbola zanak'alika izy ireo. Ny Labs olon-dehibe dia tena manatanjaka azy ireo mandritra ny maha alika kely azy ireo amin'ny fehikibo, fa tsy bolt eo am-baravarana sy eo am-bavahady alohan'ny olombelona. Alika mpiambina ireo alika ireo fa tsy alika mpiambina, na dia fantatra aza fa miambina ny sasany. Afaka ny ho tonga izy ireo Handringanana raha tsy 100% ny olombelona mpitarika fonosana ary / na raha tsy mahazo ampy izy ireo fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana , ary navela be loatra tamin'i ny fitaovany manokana . Amin'ny ankapobeny dia mavesatra sy mora kokoa ny mandeha ny tsipika raha oharina amin'ny tsipika an-tsaha. Ny tsipika an-tsaha dia mazoto be ary mora foana lasa strung avo tsy misy fanatanjahan-tena . Ny laboratoara namboarina avy amin'ny andalana anglisy (Labs anglisy) dia milamina kokoa ary milamina kokoa noho ny Labradors namboarina avy amin'ny tsipika amerikana. Ny Labs Anglisy dia matotra haingana kokoa noho ny karazany amerikanina.
Haavony: Lehilahy 22 - 24 santimetatra (56 - 61cm) Vehivavy 21 - 23 santimetatra (53 - 58 cm)
Milanja: Lehilahy 60 - 75 pounds (27 - 34 kg) Vehivavy 55 - 70 pounds (25 - 32 kg)
Ny lehilahy sasany dia afaka mitombo hatramin'ny 45 kilao na mihoatra.
Mora voan'ny hipoka sy kiho dysplasia, PRA, fivontosan'ny sela sy aretin-tsaina.
Labrador Retrievers dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary hanao ny tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny.
Labrador Retrievers dia alika mavitrika, faly miasa sy milalao mafy. Mila entina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ho eo amin'ny voninahiny izy ireo raha omenao asa izy ireo. Mahazoa mora foana, aza mihoatra ny sakafo.
Ny palitao malama sy lava volo ary roa sosona dia mora tehirizina. Mikorisa sy miborosy matetika amin'ny borosy mafy orina, mijery ny akanjo lava. Mandrosoa na shampooo maina raha tsy ilaina. Ireo alika ireo dia mpandatsa-dra.
Fantatra tamin'ny anarana hoe 'Alikan'i St John', ny Labrador Retriever dia iray amin'ireo karazany malaza indrindra any Etazonia. Ny Lab dia teratany Newfoundland, izay niarahan'izy ireo niara-niasa tamin'ireo mpanjono nanarato trondro izay nanjavona avy teny andalana ary niofana hitsambikina any anaty rano mangatsiaka mba hanintona ny harato. Ny specimens dia nentina tany Angletera tamin'ny taona 1800 tamin'ny sambo anglisy avy any Labrador. Ny karazany dia niampita tamina setter, spaniels ary karazana retrievers hafa hanatsarana ny toetrany ho mpihaza. Ny Labrador dia mora ampiofanina ary tsy vitan'ny hoe mpiara-miasa aminy fa mahay ihany koa amin'ny: fihazana, fanarahan-dia, fakana, mpiambina, asan'ny polisy, fitadiavana zava-mahadomelina, torolàlana ho an'ireo jamba, alika serivisy ho an'ny sembana, fikarohana sy famonjena, sliding, sarety, haingam-pandeha, mpifaninana amin'ny fanandramana ary fankatoavana amin'ny fifaninanana.
Jake ilay Lab mavo 20 volana, Hamlet Lab sôkôla 17 volana ary Othello ilay Lab mainty 19 volana
Henry the Labrador English mavomavo Retriever ao anatin'ny 1 taona sy 9 volana, novolavolain'i Wintergate Labradors ( Hijery misimisy kokoa momba an'i Henry )
Bernie the chocolate Labrador Retriever amin'ny faha-6 taonany— 'Bernie mbola mino ao am-pony fa alika am-pofoana izy.'
Caesar the Labrador mainty Retriever amin'ny faha-11 volana— 'Tia anao Caesuuuu!'
Maggie May ny sôkôla Labrador Retriever amin'ny 4 taona— 'Ity no Puppy Valentine, Maggie May. Teraka tamin'ny 2010 izy tamin'ny 14 febroary, andron'ny mpifankatia, izay mahatsikaiky satria laboara sôkôla :) nahazo Maggie aho tamin'ny lohataona 2010. 4 1/2 volana izy. Ary adala tanteraka. Nandritra ireo volana vitsivitsy voalohany niterahako azy dia nanana aho fiarahana mifankatia miaraka aminy. Satria tsy voafehy loatra izy, miaraka amin'ny tena manjary alika kely , Tsy maintsy ninoako hatramin'ny voalohany fa fantany fa izaho no pack boss . Rehefa nihalehibe izy dia naneho mariky ny herisetra tamin'ny alika sy olona ivelan'ny fonosinay (fianakavianay) ihany koa. aho tsy nampaninona azy ny herisetra tena betsaka, satria tsy antenain'ny olona ho mahery setra ny Labs ary izany dia zavatra azo antoka ho ahy, saingy tokony ho azoko antoka fa fantany fa rehefa niteny aho hoe 'Atsaharo izany', 'Tsia', na 'Knock it off' , hajanony avy hatrany ny fikororohany sy / na ny fidradradradrany. Maggie dia nanao fampiofanana toy ny pro. Tiany ny 'miasa', araka ny niantsoako azy. Ny sainy sy ny fifantohany amiko dia, ary mbola, tsy amin'ity tontolo ity. Rehefa milalao miaraka amin'ireo namany doggie izy dia azoko atao ny miantso azy ary handeha hanidina amiko izy, manadino tanteraka ireo alika hafa ary mifantoka amiko. Ny fifantohany tamiko dia tena tsara ka tsy azo atokisana izy saika toe-javatra rehetra afaka 11 volana. Ankehitriny efa ho 5 taona izao dia tonga lafatra izy. Mila be dia be ny alika akaikin'ny fahalavorariana, ary Maggie dia akaiky azy toy ny alika afaka mahazo ny hevitro. Maggie dia manana zandriny canine 3: Sugar, mifangaro Labrador / Golden Retriever 14 taona , no sakaizany akaiky indrindra. Angus (karazana fifangaroana 3 taona) sy Tippy (1 taona Pit Bull / Corgi ) dia mpiara-miasa aminy amin'ny asa ratsy. Miantso azy ireo aho Ireo lamba telo . '
Maggie May ny sôkôla Labrador Retriever amin'ny 4 taona
'Mocha (90 lbs.), Ny sôkôla vavy 2 taona sy Labasy (23 lbs.), Lab volafotsy vehivavy 4 volana - mbola tsy nahita alika roa mitovy mihitsy aho, tena mpinamana be tokoa. Naheno olona nilaza aho raha manana alika tsara ianao ary mahazo alika kely, ilay lehibe dia handray anjara lehibe amin'ny fampiofanana ilay alika vaovao fantatro izao fa marina. Izy ireo dia ampahany lehibe amin'ny fianakavianay ary tsy azonay an-tsaina ny fiainana raha tsy misy azy ireo. '
Ity i Oscar ilay Amerikanina mainty Labrador Retriever amin'ny 2 taona. Miandry ny tompony manipy azy ny baolina. Mariho ny fomba ahavon'ny rambony. Midika izany fa ao anaty toe-tsaina mientanentana izy. Nahazo fanatanjahan-tena mampihetsi-po be dia be i Oscar amin'ny filalaovana baolina. Ity karazana fanatanjahan-tena ity dia mandreraka ny vatana, fa mitazona ny saina amin'ny fomba fientanentanana avo. ny ilaina ny mandeha an-tongotra ihany koa mba hampihetsi-po sy hampitony ny saina .
Mpanavotra mavo Labrador Retriever
Zeke ilay sôkôla Labrador Retriever amin'ny faha-13 taonany— 'Sakaiza rehetra. Aza mihaona amin'ny olon-tsy fantatra. Mety ho iray amin'ireo lehibe indrindra alika nandeha any Etazonia (na amin'ny top 1%). Malahelo azy fatratra. '
'Ity no zanako-lahy Bauer amin'ny 3 volana. Labrador Retriever mavo volomparasy avy any Heather Hollow Farm Labradors any Hardwick, VT izy. Tia matory be izy ary milalao tosika. Tiany koa ny mihady ny tokontany izay tsy dia faly loatra ry Neny sy i Dada :-). Tiany ny mandeha an-tongotra sy milalao alika hafa. Izy dia zaza marani-tsaina tokoa ary mianatra haingana be. Izy dia efa zatra nanofana potiôna — ampiasainay ny lakolosy eo amin'ny tata-baravarana - ary matory mandritra ny alina izy. TIA ny vatany ary handeha irery izy rehefa mila fotoana kely fotsiny izy. Tiany ihany koa ny mifihina eo am-pofoanao, izay mety hiteraka olana rehefa 80 lbs izy. indray andro :-)'
Chocolate English Labrador Retriever - Sary natolotry ny Endless Mt. Labradors
'Molly Girl ao anatin'ny 2 volana — Molly dia isaky ny sôkôla Lab, saingy tsy nisy na inona na inona tantara mahatsiravina nampitandremana ahy! Tsy dia mahery vaika be izy, angamba noho ny ampahany amin'ny fanatanjahan-tena isan'andro Azoko antoka fa azony. Vonona ny hampifaly izy ary tena mahatoky. Miarahaba ny tsirairay amin'ny gadona rambony izy ary tiany ho tiavina! Toy ny alika rehetra, ny tsy fitoviana dia manan-danja rehefa miofana, ary misaotra an'izany, ary zaridaina alika , Molly no alika lavorary :) '
Ripley ilay Labrador Retriever volafotsy amin'ny 11 volana
Silver Labrador Retriever, sary nahazoana lalana avy amin'i Crist Culo Kennels
Tai the Lab sôkôla amin'ny taona 1 taona misy tehina lava ao am-bavany
Ankizy kely mahafatifaty telo mampiseho ny loko Labrador telo, anoloana sy aoriana, mainty, mavo ary sôkôla, sary natolotr'i Mirage Labrador Retrievers
beagle sy dachshund afangaro alika kely
'Ity no Lab mainty vao natsangana antsoina hoe Dozer. Herintaona sy tapany izy amin'ity sary ity ary noraisinay avy amin'ny kilao izy. Toy ny ankamaroan'ny Labs dia tiany ny rano (araka ny hitanao amin'ny sary) raha ny tena izy, tiany kely loatra izy. Mila miara-miasa aminy isika amin'ny tsy faniriana be loatra amin'ny rano, saingy maniry fatratra izy hampifaly azy fa tsy tokony ho mafy loatra izany. Raisinay izy mandeha roa isan'andro miaraka aminy mitondra kitapom-batsy ho an'ny alika, ny iray dia an-tongotra an-tongotra telo kilaometatra ary nilomano antsasak'adiny farafahakeliny. Mijery ny Whisperer Dog foana aho, ka fantatro fa amin'ny fanarahana ny fombany sy amin'ny i Dozer dia maniry fatratra ny hampifaly izay olana rehetra ananany dia afaka manatsara azy ireo isika. '
Dozer ilay Labrador mainty mainty amin'ny 1 1/2 taona
'Cappy dia Labrador Retriever 17 volana madio. Cappy dia alika mpiara-miasa sy alika mahafinaritra. Ny hetsika tiany indrindra dia ny mitaingina fiara, milomano, mandray olona, ​​mifanena amin'ny olom-baovao ary milalao miaraka amin'ny zokiny vavy, Lab mainty. '
'Cappy manao izay tiany… mitsidika trano fisotroana kafe eo an-toerana izay nipetrahany tao amin'ny tsora-kazo mafana an'ny tompony. Tian'i Cappy ny fisotroana kafe fa heveriko fa ampahany noho izy nahazo biscuit rehefa nandeha matetika tao amin'ilay fivarotana izy. '
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ny Labrador Retriever
Sary Labrador Retriever 1
Sary Labrador Retriever 2
Sary Labrador Retriever 3
Sary Labrador Retriever 4
Sary Labrador Retriever 5
Sary Labrador Retriever 6
Sary Labrador Retriever 7
Sary Labrador Retriever 8
Sary Labrador Retriever 9
Sary Labrador Retriever 10
Sary Labrador Retriever 11
Retrievers Silver Labrador
Alika Retriever any Labrador: sarivongana Vintage azo angonina
afangaro amin'ny bulldog frantsay sy ny boxer
manao ahoana ny alika chow chow
fifangaroana alika omby australianina collie sisintany
pitbull afangaro amin'ny mpanao ady totohondry alika kely
sisin-tany collie & labrador retriever mix